General Conditions d'utilisation - Rikoooo
General Conditions d'utilisation ny Rikoooo.com
Voaova farany tamin'ny amin'ny 16 / 01 / 2017
Ireo Fepetra fampiasana mamaritra ny fepetra izay ny Website Rikoooo.com manolotra ny fidirana ho any amin'ny tolotra. By ny fisoratam amin'ny Rikoooo.com, no manamafy ny manaiky ny stipulations rehetra ireo General Conditions d'utilisation. Raha tsy mitovy hevitra ireo fepetram sy Conditions, dia mety tsy mampiasa ny tolotra.
Izany asa fanompoana Ampahafantarin'Andriamanitra anao na oviana na oviana ny rakitra vaovao tsy ampy alaina sy fampahalalana manan-danja. Ny adiresy email dia tsy mifindra amin'ny misy antoko fahatelo ary mitoetra tanteraka tsiambaratelo. Afaka amin'ny fotoana rehetra manova sy manafoana ny famandrihana avy amin'ny member area na eo amin'ny farany ambany ny tsirairay nahazo mailaka.
Nampiasa ny momba ny tenanareo Area
Mba hahazoana ny mpikambana faritra, manana ny Solon'anarana sy ny tenimiafina izay tapa-kevitra ny tenanao ianao rehefa niditra voalohany izany. Raha ny fahaverezan'ny ireo anaram-pikambana sy teny miafina ianao dia afaka mahita azy ireo haingana teo amin'ny toerana Rikoooo.com amin'ny fipihana eo amin'ny rohy izay eo amin'ny faritra ny famantarana;
Ianao dia ho nandefa mailaka misy ny tenimiafina.
Araka ny lalàna "Informatique de Liberté" ny 6 Janoary 1978, manana ny zo fidirana, manova, hanitsy ary hamafa tahirin-kevitra momba anao.
Mba mampihatra io zo io dia misy vahaolana telo ho anao.
- Log in ny "Member Area"Ary hanao fanovana amin'ny aterineto.
- Contact ny Webmaster
- Alefaso ny soso-kevitra taratasy ho Rikoooo.com 107 chemin, Gaillard de Port 31410 Noé - Frantsa
Rikoooo.com dia manaiky hampiasa midika rehetra ilaina mba hiantohana ny fanomezana tsara indrindra ny asa dia manolotra ny mpampiasa aterineto. Tsy azo natao mendrika ao amin'ny hetsika-kery majeure na mitana ny toeran'ny mihoatra noho ny fanaraha-maso, indrindra indrindra ao amin'ny hetsika iray interruption ny asa fanompoana vokatry ny tsy fahombiazana ny telefaonina tambajotra na ny aterineto mpanome ny Internet mpampiasa na fanavaozam-baovao ny toerana na ny Internet singa mpizara.
Rikoooo.com dia tsy tompon'andraikitra ny fampiasana izay mety ho atao amin'ny ny mpampiasa ny vaovao sy asa hita ao amin'ny ny toerana.